Ny kabary dia lehibe indrindra eo amin'ny fahaizana, mariky ny saina ary ny voninahitry ny kolontsain'olombelona; fa ny niavian'ny fitenenana rehetra dia ao amin'ny Breath. Avy aiza ny fofom-bavany sy izay alehany dia azo ianarana amin'ny alàlan'ny fanarahana ny torohevitra momba ny Delphic Oracle: "Fantatry ny olona ny tenanao."
Vol. 1 JULY, 1905. Tsia
NY OLONA ao amin'ny fianakavian'olombelona dia miaina avy amin'ny fotoana hidirany amin'ity tontolo ara-batana ity mandra-pahatongan'ny fotoana hialany, fa tsy hatramin'ny ampahefan'ny taonjato farany no nisy ny sampan'ny andrefan'ny fianakaviana nifantoka tamin'ny maha-zava-dehibe ny fofon'aina, ary amin'ny fizotry ny rivotra. Notsinihina tsara ny lohahevitra, dia nalain'izy ireo ny fomba nanoloran-tenan'ny "mpampianatra" ary maro no tezitra. Nipoitra teo anivonay ny manam-pahaizana momba ny siansa fofonaina, izay, raha nandinika, dia mampianatra ny tsy manam-petra ny fomba ahazoana sy ny fitazonana ny fahatanorana tsy mety maty, ny fisondrotam-pahefana, mahazo fahefana amin'ny lehilahy rehetra, mifehy sy mitarika ny herin'ny an'izao rehetra izao, ary ny fomba hahazoana any amin'ny fiainana mandrakizay.
Mihevitra isika fa ny fanatanjahan-tena dia mety hahasoa raha tsy raisina eo ambany fitarihan'ny olona manana fahalalana tena izy ary rehefa avy nanofana sy nampifanentana azy ireo ny sain'ny mpianatra noho ny fandinihana ny filozofia, satria izany no hampianatra ny hafa fahaiza-manao sy toetra ao amin'ny mpianatra satria nivelatra amin'ny fofon'aina izy ireo, ary hamela azy hiatrika ny loza ateraky ny fampandrosoana ara-tsaina. Tsara ny fofon'aina lava voajanahary, saingy, noho ny fanazaran-tena amin'ny fofonaina, dia maro no nanalefaka ny fihetsiky ny fo sy nanaovana fanakorontanana, miteraka aretina, ary koa ny fanjifana matetika - nanjary kivy sy mihalevona, mahazo ny filàm-bolo sy ny fofom-paniriana be loatra. nanala ny sain'izy ireo ary efa nifarana tamin'ny famonoan-tena aza.
Hafa ny fofon'aina. Misy ny fofon'aina lehibe izay mihena sy mikoriana amin'ny gadona tsy mitsahatra; avy amin'ireo alàlan'ny anjerimanontolo izay miaina avy amin'ny tsy hita maso sy ny hita maso. Avy amin'ireo rafi-masoandro tsirairay tsy hita isa dia miaina ao anatin'ny rafitr'ity tontolo ity; ary ireo tsirairay ireo dia mamorona endrika maro isan-karazany. Ireo endrika ireo dia averina amin'ny alàlan'ny fidiran'ny rafitra eran'izao tontolo izao, izay manjavona amin'ny rafi-panjakany, ary miverina ao amin'ny Great Breath.
Amin'ny alàlan'ny olona, ​​izay dika mitovy amin'izany rehetra izany, dia fofonaina maro no milalao. Izay antsoina matetika hoe fofonaina vatana dia tsy fofonaina akory, izany dia fihetsika mifoka rivotra. Ny fihetsiky ny rivotra miaina dia vokatry ny fofon'aina ara-tsaina izay iraisan'ny olona sy ny biby koa, io fofonaina io dia mitazona ny fiainana. Ny rivotra miaina dia tsy azota ary oksizenina, fa ireo singa ireo miaraka amin'ny hafa dia ampiasain'ny fofona ara-tsaina mba hanohanana ny vatana amin'ny sakafo sasany. Ity fofonaina ity dia mandray anjara maro ary manisy tanjona maro. Rehefa miditra ao amin'ny vatana izy rehefa teraka dia mahatonga ny fifandraisan'ny fiainana ao amin'io vatana io sy ny ranomasin'ny fiainana izay ihetsiketsika ny tany sy ny vatan'ny olona. Rehefa tafapetraka ny fifandraisana dia io fofonaina io dia mitantara ny fiainana ankehitriny tsy misy sy ao anaty vatana amin'ny foto-kevitry ny endrika, izay mamolavola ny fivoaran'ny fiainana ao anaty endrika sy endrika ny vatana. Manetsiketsika ny fofonaina sy ny atiny io fofonaina io dia manentana azy ireo ny filan'ny filàna sy ny filana ary ny faniriana. Rehefa milalao ny tadin-kiraro aeolian ny rivotra, ny fofom-panahy dia mihazona ny harato eo amin'ny vatana, dia manelingelina ny saina ary mitarika azy ho amin'ny eritreritra manjavozavo, na dia tsy an'ny olona aza - na ny fonenany manohy ary manatanteraka ireo faniriana natolotry ny vatana.
Fa ny tena fofonain'ny olona dia ny fofon'aina ary hafa tsy mitovy. Izy io no fitaovana amin'ny alàlan'ny saina miasa amin'ny vatana. Io ny fofona izay misy fiantraikany amin'ny eritreritra, izany hoe ireo eritreritra nateraky ny saina. Ity fofonaina eritreritra ity dia ny vatana na ny fitsipiky ny saina mihitsy, izay ampiasain'ny fanahy mandrakizay mandrakizay ho toy ny fiara hampifandraisany amin'ny vatana ara-batana rehefa teraka. Rehefa niditra tao amin'ny vatana io fofonaina io, dia nanamafy ny fifandraisan'ny vatana ara-batana sy ny foto-kevitra ego na "I am". Amin'ny alalany dia miditra ny an'izao tontolo izao ny ego, mandao izao tontolo izao, mandao izao tontolo izao, ary mandalo amin'ny fahatongavana ho nofo. Ny ego no miasa sy miara-miasa amin'ny vatana amin'ny fofon'aina. Ny fihetsika tsy miovaova sy eo amin'ny vatana sy ny saina dia tanterahana. Ny fofonain'ny saina dia manondraka ny fofon'aina.
Eo ihany koa ny fofonaina ara-panahy, izay tokony hifehy ny saina sy ny fofona-tsaina. Ny fofon'aina ara-panahy dia ny foto-kevitra famoronana izay ahatonga ny fahendreny, mifehy ny saina ary mampifanaraka ny fiainan'ny olombelona amin'ny tanjon'Andriamanitra. Io fofonaina io dia tarihin'ny sitrapo amin'ny fivoarany amin'ny vatana izay mamoha ireo foibe maty, manadio ny taova izay nisy maloto tamin'ny fiainana an-tsaina, mandrisika ireo idealy ary miantso amin'ny maha-zava-dehibe ny fahafaha-misitsy ny fahafahan'ny olombelona.
Ny fofon'aina sy ny fanohanan'izy ireo dia ny Mamofona Lehibe.
Mihetsika ny fofonaina toa mihetsiketsika toa ny fofonaina, izany hoe fofom-batana, miditra ao amin'ny manodidina an'io vatana io. Io fidirana fofonaina io no fiandohan'ny fananganana ny maha-olona amin'ny alalàn'ny maha-olombelona eto an-tany. Misy afovoan-fofonaina iray ao anaty vatana ary afovoany hafa ivelan'ny vatana. Mandritra ny fiainana dia misy fihenam-baravarana ary misy mikoriana eo anelanelan'ny foibe roa ireo. Amin'ny fotoan'ny fitrandrahana ara-batana tsirairay dia misy ny fofon'aina mifanaraka amin'izany. Ny fahasalamana ara-batana, ara-pitondran-tena, ary ara-panahy, dia miankina amin'ny hetsika mirindra tsara eo amin'ireo ivony ireo. Raha misy olona maniry ny ho fofon'aina amin'ny hafa noho ny hetsika tsy an-tsitrapo, ny fikolokoloana dia tokony ho raisina fa ny karazana sy ny fizotry ny fofon'aina arahana dia miankina amin'ny fahasalamana ara-batana, ara-pitondran-tena ary ara-panahy, ao anatin'ny ambiny sy ny faniriany. Ny fofonaina dia ny atiny anatiny sy ivelany ataon'ilay pendulum izay manala ny ain'ny vatana. Ny fihetsiky ny fofon'aina eo anelanelan'ny foibe roa dia mitana ny fandanjalanjana fiainana ao amin'ny vatana. Raha manelingelina amin'ny alàlan'ny hadalana na noho ny finiavana, dia ho aretin-tsaina ny fahasalaman'ny vatana sy ny saina ary hisy aretina na fahafatesana. Ny fofonaina matetika dia mikoriana avy amin'ny orona ankavanan'ny havanana mandritra ny adiny roa, avy eo dia miova sy mivezivezy mamakivaky ny orona roa izy ireo mandritra ny minitra vitsy, ary avy eo amin'ny tohatra ankavia ankavia mandritra ny adiny roa. Aorian'izany dia mivezivezy amin'ny alàlan'ny roa tonta izy ary avy eo amin'ny ilany havanana. Amin'ny olona salama tsara dia mitohy hatrany amin'ny fahaterahana ka hatramin'ny fahafatesana.
Ny mampiavaka ny fofon'aina tsy fantatra amin'ny ankapobeny dia mihetsiketsika ao anatiny sy manodidina ny olona amin'ny onjan-karazany miovaova, izay voafaritry ny fofon'aina voajanahary, ary amin'ny fahasalamana sy ara-batana ara-batana, ara-batana ary ara-panahy.
Ankehitriny ny fampiharana fofonaina dia mitaky ny fanovana an-tsitrapo ny mikoriana avy amin'ny ankavia na ny ankavia mankany amin'ny ankavanana na ankavia, arakaraka ny raharaha, alohan'ny hidirana ny fiovana voajanahary, ny fisorohana tsy hiasa, ary koa ny fanovana ny halavan'ny onja. Raha ny voalaza momba ny fofonaina dia tsy maintsy ho hita fa ny fifandraisana malaky ny olombelona miaraka amin'izao rehetra izao dia mety ho voasarika mora foana ary ny fifandraisany dia tsy mandanjalanja. Noho izany dia ny loza lehibe ho an'ny tsy mahalala sy ny maimaika izay manao fanazaran-tena amin'ny fofonaina nefa tsy mahazo antoka fa mendrika izy, sy ny fananana mpampianatra mahay.
Ny hetsika ny fofonaina dia miasa amin'ny fahafaha-manao maro ao amin'ny vatana. Ny fikojakojana ny fiainana biby dia mitaky ny fanohizana ny oksizenina sy ny fitrandrahana asidra karbonika. Amin'ny alàlan'ny fanodikodinana ny rivotra dia voasintona ho any amin'ny havokavoka izay atrehin'ny rà, izay mandray ny oksizenina, diovina ary ampitaina amin'ny alàlan'ny rafitry ny arterialina amin'ny faritra rehetra ao amin'ny vatana, amin'ny fananganana sy ny famahanana sela; avy eo amin'ny alàlan'ny lalan-drà dia miverina amin'ny alàlan'ny asidra karbika ny ra miverina miaraka amin'ny ampahany amin'ireo vokatra fako sy zava-mahadomelina, izay noroahana hiala ny havokavoka tamin'ny fipoahana. Ka ny fahasalaman'ny vatana dia miankina amin'ny oxygenation ampy amin'ny rà. Mihoatra na eo ambanin'ny oxygenation ny ra no mahatonga ny fananganana sela amin'ny alàlan'ny fandehanan'ny ra izay tsy manan-kilema amin'ny toetra, ary mamela ireo mikraoba aretina hitombo. Ny aretina rehetra ara-batana dia noho ny fiakaran’ny oxygenation ra. Ny ra dia avy amin'ny oxygen, amin'ny alàlan'ny fofonaina ary ny fofonaina dia miankina amin'ny kalitao fisainana, hazavana, rivotra ary sakafo. Ny eritreritra madio, ny fahazavana be, ny rivotra madio ary ny sakafo madio no manosika ny fifohana rivotra amin'ny alàlan'ny fitrandrahana tsara, noho izany ny fahasalamana tsara.
Ny havokavoka sy ny hoditra no tsy fantsom-piainan'ny olona iray. Tonga ny fofon'aina ary mandalo amin'ny taova rehetra ao amin'ny vatana; fa takatra fa ny fofonaina dia tsy ara-batana, fa ara-tsaina, ara-tsaina, ary ara-panahy.
Ny fofonaina dia manainga ny kibo, aty sy molotra; ny filana, ny faniriana, ary ny faniriana. Midira ao am-po ary manome hery amin'ny fihetseham-po sy eritreritra; miditra ao an-doha izy ary manomboka ny fihetsik'ireo tonian'ny fanahy ao anaty atidoha anatiny, mampifandray azy ireo amin'ny planeta ambony kokoa. Ka ny fofon'aina izay saina voa dia miova ao an-tsain'olombelona. Ny saina dia ny fahatsiarovan-tena "Izaho", fa ny "Izaho" no fiandohan'ny lalana izay mitondra mankany amin'ny tsy mahomby - Fahatsiarovan-tena.